လွယ်လွယ်ကူကူ New Skiin Toner နဲ့ မျက်နှာကို ချေးချွတ်မယ် 🤗 မျက်နှာမှာ နေ့စဉ် ဆဲလ်အသစ်တွေ အဟောင်းတွေက ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆဲလ်သေတွေကို သေချာ မဖယ်ရှားဘူးဆိုရင် ဆဲလ်အဟောင်းတွေက အရေပြားပေါ်မှာ တင်ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ဆဲလ်သေတွေ စုပုံလာတာနဲ့အမျှ အရေပြားက မာကျောပြီး ဝင်းပမှုမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဆဲလ်သေတွေကို ချွတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Spa သွားစရာမလိုပဲ အိမ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ မျက်နှာကို ချေးချွတ်ပေးဖို့ဆို New Skiin Brightening Exfoliation Toner ကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ New Skiin Toner မှာ ပါဝင်တဲ့ AHA (Ciric Acid) နဲ့ PHA (Lactobionic Acid) တို့က အရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်အသေများ၊ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှား သန့်စင်ပေးပြီး အသားအရေကို သန့်စင်ချောမွတ်လာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Skin Care များရဲ့ စိမ့်ဝင်မှုအားကို ကောင်းစေပြီး အသုံးပြုတဲ့ Skin Care များရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်း အပြည့်အဝ ရရှိစေပါတယ်။ New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၉,၀၀၀ ကျပ်
🍅🍓🍊 ချွေးပေါက်ကျဉ်း ဆားဝက်ခြံကင်းဖို့ New Skiin Toner သုံးစို့ 🍉🍋🥝 New Skiin Brightening Exfoliation Toner မှာပါဝင်တဲ့ AHA (Citric Acid) ကို 🍋 သံပုရာသီး၊ သံပုယိုသီး၊ 🍊 လိမ္မော်သီးတို့မှ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ AHA က အရေပြားချွေးပေါက်များကို သန့်စင်ပေးပြီး ဆားဝက်ခြံများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ချွေးပေါက်ကင်းစင်ပြီး ချောမွတ်တဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ်။ Citric Acid မှာ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်စွမ်းအား ပါဝင်လို့ အရေပြား အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ 🌙 ညအချိန် New Skiin Facial Foam နဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီး Cotton pad နဲ့ မျက်နှာကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ 🍅🍓 Low pH 🍊🍉 Skin Brightening & Anti Wrinkle 🍋🥝 Alcohol free New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၉,၀၀၀ ကျပ်
အဆီပြန် ဝက်ခြံပျောက်ကင်းချင်သူများအတွက် New Skiin Set ? အဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေသူတွေ ဆားဝက်ခြံ အဆီဖုကြောင့် စိတ်ညစ်နေသူတွေအတွက် ဒီ New Skiin Set လေးကို သုံးနော် ? ? Salucylic Acid Foam Cleanser က အရေပြားဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဝက်ခြံ၊ ဆားဝက်ခြံနှင့် အဆီဖုကိုလဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ? Toner မှာပါဝင်တဲ့ AHA (Citric Acid) နဲ့ PHA (Lactobionic Acid) တို့က အရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်အသေများ၊ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှား သန့်စင်ပေးပြီး အသားအရေကို သန့်စင်ချောမွတ်လာစေပါတယ်။ ? Sleeping Cream ရဲ့ Lavandula Angustifolia က အရေပြား ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပြီး ပိုးမွှားများဘေးအန္တာရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးကာ အသားအရေကို ကျန်းမာလာစေပါတယ်။ ? Snail မှာ ပါဝင်တဲ့ Niacinamide က ဆဲလ်အသစ် ဖြစ်ပေါ်မှု မြန်ဆန်တာကြောင့် ဝက်ခြံတွေကို သက်သာလာစေပါတယ်။ ? Toner ကို ညဘက်မှသာ အသုံးပြုပေးပြီး Foam Cleanser , Sleeping Cream, Snail တို့ကို မနက်ရော ညပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ? New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ? Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၃၁,၀၀၀ ကျပ် ? New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၉,၀၀၀ ကျပ် ? Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၂၀,၅၀၀ ကျပ်
အသားအရေ စိုပြေ တင်းရင်းချင်သူများအတွက် New Skiin Set ? အရွယ်မတိုင်ခင် အရေးအကြောင်းတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ အသားအရေတင်းရင်းချင်သူတွေ အသားရေခြောက်သူတွေ နဲ့ အသားအရေ စိုပြေချင်သူတွေအတွက် ဒီ New Skiin Set လေးကို သုံးနော် ? ? Collagen Foam Cleanser က Collagen ပြည့်ဝစွာ ပါရှိတာကြောင့် အိုမင့်ရင့်ရော်ခြင်းကို အကောင်းဆုံးဆန့်ကျင်ပေးပြီး အသားအရေကို နုပျိုတင်းရင်းစေပါတယ်။ ? Toner မှာ ပါဝင်တဲ့ Sodium Hyaluronate က အသားအရေ အစိုဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ တင်းရင်းပြီး အရေးအကြောင်းကင်းစင်တဲ့ အရေပြားကို ရရှိစေပါတယ်။ Xylitol က လန်းဆန်းတဲ့ ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းပြီး အရေပြားကို အစိုဓါတ်လည်း ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ ? Sleeping Cream ရဲ့ Adenosine နဲ့ Seawate က အရေးအကြောင်းများကို လျော့ချပေးပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းလာစေပါတယ်။ Hyaluronic Acid က ရေဓာတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ ? Snail ရဲ့ Vita Collagen က အသားအရေတင်းရင်းမှုအတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ ကော်လဂျင့်ပြည့်ဝစွာ ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် အရေးအကြောင်းများကို သိသာစွာ ပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းနုပျိုစေပါတယ်။ ? Toner ကို ညဘက်မှသာ အသုံးပြုပေးပြီး Foam Cleanser , Sleeping Cream, Snail တို့ကို မနက်ရော ညပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ? New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ? Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၃၁,၀၀၀ ကျပ် ? New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၉,၀၀၀ ကျပ် ? Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၂၀,၅၀၀ ကျပ်
အသားအရေ ဖြူစင်ဝင်းပချင်သူများအတွက် New Skiin Set ? တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်ကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ အသားအရောင် မညီညာလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဒီ New Skiin Set လေးကို သုံးနော် ? ? Vitamin C Foam Cleanser က Vitamin C ပြည့်ဝစွာ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားလို့ အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပပြီး အသားအရေညီညာလာကာ တင်းတိတ်၊ မှဲ့ခြောက်များ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အသားကိုလဲ ဖြူစင်ဝင်းပစေပါတယ်။ ? Toner မှာပါဝင်တဲ့ Bioluminopeel က အရေပြားဆဲလ်များမှ မယ်လနင်အရောင်ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ချပေးပြီး တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေကာ အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေပါတယ်။ ? Sleeping Cream မှာပါဝင်တဲ့ Niacinamide က အရေပြားဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို အားပေးပြီး အရေပြားပေါ်ရှိ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အသားအရောင်ကို ဖြူဝင်းလာစေပြီး အသားအရောင် ညီညာလာစေပါတယ်။ ? Snail မှာပါဝင်တဲ့ Antioxidants က အစွမ်းထက် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အမည်းကွက်၊ အမည်းစက်များ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ? Toner ကို ညဘက်မှသာ အသုံးပြုပေးပြီး Foam Cleanser , Sleeping Cream, Snail တို့ကို မနက်ရော ညပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ? New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ?Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၃၁,၀၀၀ ကျပ် ?New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၉,၀၀၀ ကျပ် ?Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၂၀,၅၀၀ ကျပ်
??? အသားအရေ စိုပြေစေတဲ့ New Skiin Toner ??? Toner သုံးရင် အသားခြောက်တယ်ဆိုပြီး တော်တော်များများက ပြောကြတယ် ခြောက်သွေ့ပြီး အေးတဲ့ အခုလို ရာသီဉတုမျိုးမှာဆို New Skiin Brightening Exfoliation Toner က အသင့်တော်ဆုံးနော် ဘာကြောင့်လဲဆို New Skiin Toner က ဆဲလ်သေ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးတာ အပြင် အစိုဓါတ်ကိုလဲ ထိန်းပေးပါသေးတယ်။ Toner မှာ ပါဝင်တဲ့ Sodium Hyaluronate က မျက်နှာအသားအရေကို အစိုဓါတ်ဖြည့်ပေးတယ်။ Xilytol က လန်းဆန်းတဲ့ ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းပြီး အရေပြားကို အစိုဓါတ်လည်း ဖြည့်တင်းပေးသည်။အရေးအကြောင်းကင်းစင်ပြီး တင်းရင်းတဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေတယ်။ Alcohol Free, Low pH ဖြစ်ပြီး Brightening နဲ့ Antiwrinkle Effect ပါ ပါသေးတယ်ဆိုတော့ ပြည့်စုံပြီပေါ့ New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၉,၀၀၀ ကျပ်
ချွေးပေါက် ဘာကြောင့် ကျယ်ရတာလဲ ❓ မျက်နှာမှာ ? လိမ္မော်ခွံလို ချွေးပေါက်ကျယ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေလား ❓ ချွေးပေါက်ကျယ်ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းကတော့ အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို မဖယ်ရှားလို့ပါ။ ဆဲလ်သေတွေများလာရာကနေ အရေပြားက မာလာပါတယ်။ အဲ့အခါ ချွေးပေါက်တွေက ပိုပေါ်လာပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေ ကျယ်လာပြီဆိုရင် ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ချေးချွတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အသားအရေကို ပုံမှန် ချေးချွတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ချွေးပေါက်တွေ ကျဉ်းလာပြီး အရေးအကြောင်းတွေလဲ ရှင်းသွားပါမယ်။ အသားအရေကိုလည်း ဖြူဝင်းလာစေပါတယ်။ New Skiin Brightening Exfoliation Toner မှာ ပါဝင်တဲ့ AHA (Citric Acid) က အရေပြားချွေးပေါက်များကို သန့်စင်ပေးပြီး ဆားဝက်ခြံများကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ချွေးပေါက်ကင်းစင်ပြီး ချောမွတ်တဲ့ အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ်။ ဓါတ်တိုးစွမ်းအား ပါဝင်လို့ အရေပြား အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၉,၀၀၀ ကျပ်
တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် ဝက်ခြံ ဆားဝက်ခြံတွေကို အပြီးတိုင်ဖယ်ရှားပေးမယ့် ??? New Skiin Toner ??? ??? New Skiin Brightening Exfoliation Toner ရဲ့ အထူးပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် Bioluminopeel က အရေပြားဆဲလ်များမှ မယ်လနင် အရောင်ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ချပေးပြီး တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေကာ အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေပါတယ်။ ??? AHA (Citric Acid) နှင့် PHA (Lactobionic Acid) တို့က အရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်အသေများ၊ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှား သန့်စင်ပေးပြီး အသားအရေကို သန့်စင်ချောမွတ်လာစေပါတယ်။ ဝက်ခြံ၊ ဆားဝက်ခြံများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ညဘက် New Skiin Foam Cleanser နဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီး Cotton Pad ထဲ Toner ထည့်ကာ မျက်နှာနှင့် လည်ပင်းအနှံ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150ml) တစ်ဘူး - ၁၉,၀၀၀ ကျပ်
မျက်နှာပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို ??? ????? ??????????? ??????????? ????? နဲ့ ??? ??? လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင် ? မျက်နှာမှာ ဆဲလ်သေတွေများပြီး အသားအရေက ကြမ်းတမ်းနေလို့ စိတ်ညစ်နေလား ❓ မျက်နှာကို ချွေးချွတ်လိုက်ရင်လဲ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးပြီး အသားအရေခြောက်သွေ့မှာ စိတ်ပူနေလား ❓ ဆဲလ်သေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ် မျက်နှာအသားအရေ ခြောက်သွေ့မှုလဲ မရှိစေတဲ့ ??? ????? ??????????? ??????????? ????? ရှိတယ်နော် ??? ????? ????? မှာ ပါဝင်တဲ့ ??????????? ???? က ??????? ???? များထဲမှာ ????????? ???? အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး အရေပြားအပေါ်ယံမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်အသေများ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။ နို့မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ??????????? ???? ကလည်း အစိုဓါတ်ထိန်းပေးတဲ့ အစွမ်းလည်း ပါဝင်တာကြောင့် ချွေးချွတ်သန့်စင်ပြီး အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ??? ???? ???? နဲ့ ????????? ???? များပါ ညဘက် ??? ????? ???? ???????? နဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီး ?????? ??? ထဲ ????? ထည့်ကာ မျက်နှာနှင့် လည်ပင်းအနှံ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ - ??? ?? - ??????? ???? - ???? ??????????? & ???? ??????? - ???? ????????????? ???????? ?? ???? - ???????? ?? ???? ??? ????? ??????????? ??????????? ????? (150 ??) တစ်ဘူး - ၁၈,၀၀၀ ကျပ်
မျက်နှာအသားအရေကို ချောမွတ်နူးညံ့လာစေမယ့် အကောင်းဆုံး Toner ? Skin Care တွေ အသုံးပြုနေပေမယ့် မထိရောက်ဘူးဖြစ်နေလား❓ အရေပြားဆဲလ်အသေများဖုံးအုပ်နေပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ အရေပြားက Skin Care များကို စုပ်ယူနိုင်မှု အားနည်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် New Skiin Brightening Exfoliation Toner ကို အသုံးပြုပြီး အရေပြားကို ပုံမှန်ချေးချွတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် အသားအရေ ကြမ်းတမ်းခြောက်သွေ့မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ Skin Care များရဲ့ စိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းမွန်စေတာကြောင့် Skin Care များရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်း အပြည့်အဝ ရရှိစေပါတယ်။ ဆဲလ်အသေများ၊ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှား သန့်စင်ပေးပြီး အသားအရေကို သန့်စင်ချောမွတ်လာစေပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ မည်သည့်အသားအရေအမျိုးအစားမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ညအချိန် New Skiin Facial Foam ဖြင့် မျက်နှာသစ်ပြီး သန့်စင်သော အရေပြားပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Cotton pad ဖြင့် သင့်တော်သော ပမာဏထည့်ပြီး မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းအနှံ့ အသုံးပြုပေးနိုင်သည်။ အရေပြားပေါ်အားပြင်းစွာဖြင့် ပွတ်ဆွဲခြင်းကို ရှောင်ကျဥ်ပါ။ New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၈,၀၀၀ ကျပ်
First Page « 12» Last Page